စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ စက်ဘီးဘဲလ် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် စက်ဘီးဘဲလ်, တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ်, စက်ဘီးဘဲလ် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
တစ် ဦးစက်ဘီးဘဲလ် ၎င်းသည်အခြားလမ်းနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းအသုံးပြုသူများအားသင်ရှိနေကြောင်းကိုသိခွင့်ပေးသောအစဉ်အလာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်စက်ဘီးဘဲလ် ၊ စက်ဘီးဘဲလ် ၊ ကြေးစက်ဘီးဘဲလ် ၊ ဘုရားကျောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ၊ ကလေးများစက်ဘီးဘဲလ် ၊ တောင်တက်စက်ဘီးဘဲလ် ၊ ရိုးရာစက်ဘီးဘဲလ် နှင့် ထူးခြားသောစက်ဘီးဘဲလ် ကဲ့သို့ခေါင်းလောင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါလာသည်။ ထူးခြားသောစက်ဘီးဘဲလ် Highway Code သည်စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုတပ်ဆင်ရန်သာအကြံပြုသည်၊ သို့သော်အခြားလမ်းအသုံးပြုသူများ၊ အထူးသဖြင့်မျက်မမြင်များနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင်နိုင်သောလမ်းသွားလမ်းလာများအားစက်ဘီးခေါင်းလောင်းတပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ချဉ်းကပ်ပုံကိုရင်းနှီးသောသတိပေးချက်ပေးနိုင်ရန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအကျဆုံးစက်ဘီးဘဲလ် ခေါင်းလောင်းအိမ်အတွင်း၌လျော့ရဲ။ သတ္တုချပ်ပြားနှစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာလှည့်ရန်ရည်ရွယ်သောလက်မပါဝါမောင်းတံဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ အခြားရိုးရှင်းသောအမျိုးအစားများမှာလက်ခုပ်ကိုလက်နှင့်ဆွဲယူလိုက်သောအခါနွေ ဦး တွင်တပ်ဆင်ထားသောပြင်ပလက်ခုပ်နှင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းလောင်းသံသည်စက်ဘီးအများစုနှင့်အံကိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်းမှာစက်ဘီးရဲ့လက်ကိုင်ပတ်ပတ်လည်မှာ mounting clamp ကိုတင်းကျပ်ဖို့ဝက်အူလှည့်ရှိနေ သ၍ မင်းပုံစံကောင်းနေသင့်တယ်။